Soosaarayaasha & Shirkadaha Qalabka Wifi - Shiinaha Wifi Qalabka Qalabka
Faahfaahinta alaabta: duubista 1.8CH 1080P, 8CH oo dhab ah oo loo maqli karo. Furaha kamaradda 2.IP iyo ciyaar, looma baahna isku xirnaanta Wifi, isku xirnaan xasilan masaafo dheer. 3.1 dekedda WAN, ma leh dekedda LAN-ka oo dheeri ah, HDMI / VGA / dekedda USB-ga laba-geesood ah. 4.1 / 3 ″ 530 1.0M CMOS Sensor, 720P / 960P / 1080P 25FPS, 3.6mm X8 lens, H.265 AI oo caqli badan, si toos ah cascade wejiga qabashada 5.wired iyo wireless dhexdhexaad ah, oo loo habeeyay xaalado kala duwan; 6. P2P esee Cloud, ilbiriqsiyo fog oo ku xiran, riix farriin. WIFI NVR Model 960P 1080P S ...
Faahfaahinta Shayga: Duubista 1.4CH 1080P, 4CH oo si dhab ah loogu ciyaaro. Furaha kamaradda 2.IP iyo ciyaar, looma baahna isku xirnaanta Wifi, isku xirnaan xasilan masaafo dheer. Dekedda 3.1WAN, ma laha dekedda LAN-ka ah, HDMI / VGA / mouse laba dekedda USB ah. 4.1 / 3 ″ 530 1.0M CMOS Sensor, 1080P 25FPS, 3.6mm X4 lens, H.265 AI oo caqli badan, si toos ah cascade wajiga qabashada. 5. Isku-darka isku-xidhka ah ee siligga iyo siligga ah, oo loo habeeyay xaalado kala duwan; 6. P2P esee Cloud, ilbiriqsiyo fog oo ku xiran, riix farriin. WIFI NVR Model 4CH WIFI NVR Screen N ...
Faahfaahinta alaabta: 1.8CH 1080P Wifi NVR Kit oo leh shaashad taabasho ah 2.8CH 1080P duubitaan, 8CH oo dhab ah oo loo maqli karo. 3.IP kamarada fiilada iyo ciyaarta, looma baahna isku darka Wifi, isku xirka masaafada dheer. 4. 1 dekedda WAN, ma leh dekedda LAN-ka oo dheeri ah, HDMI / VGA / mouse laba dekedda USB ah. 5. 1/3 ″ 530 1.0M CMOS Sensor, 720P / 960P / 1080P 25FPS, 3.6mm X8 lens, H.265 AI oo caqli badan, si toos ah cascade wajiga u qabashada. 6-Taageerida VGA, HDMI Soosaarka HD isku mar; 7. Taageerida ONVIF; marin u hel dhinac saddexaad; 8. Taageer farsamada daruuraha badan ...
4CH 720P / 1080P HD Wifi NVR Qalabka leh shaashad
Faahfaahinta alaabta: 1.4CH 1080P Wifi NVR Kit oo leh shaashad taabasho ah 2.4CH 1080P duubitaan, 4CH oo ah ciyaar dhab ah 3.IP kamarada fiilada iyo ciyaarta, looma baahna isku darka Wifi, isku xirka masaafada dheer. 4. 1 dekedda WAN, ma leh dekedda LAN-ka oo dheeri ah, HDMI / VGA / mouse laba dekedda USB ah. 5.1 / 3 ″ 530 1.0M CMOS Sensor, 1080P 25FPS, 3.6mm X4 lens, H.265 AI oo caqli badan, si toos ah wajiga cascade. 6-Taageerida VGA, HDMI Soosaarka HD isku mar; 7. Taageerida ONVIF; marin u hel dhinac saddexaad; 8. Taageer farsamada daruuraha badan, n ...